မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
အားလုံး ဘှဲ့ အကြောင်းအရာ စာရေးသူ
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.20 376
ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု မရရှိနိုင်ပါ။. ပြင်ပ jabudam အဖြစ်နိုင်ငံခြားဆေးဝါးမှဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးယူပေးပါ.
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 341
အခြားအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆေးကုသစရိတ်ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ. ကြက်ခြေနီဆေးရုံတွင် ကုသစရိတ်များသာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။.
 Hope Medical Center က အခမဲ့ ကုသပေးပါသလား။?
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 364
အကြံပေးခြင်းအားဖြင့်လူနာများ၏စီးပွားရေး, လူမှုရေး, ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်မိသားစုများ၏အခြေအနေအပေါ် မူတည်. 50-90% အဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပေး, အထူးအခွအေနကြောင့် 100% အချို့ကိစ္စများတွင် ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိနိုင်သော်လည်း အသေးစိတ်ကျသော ဆေးဖိုးဝါးခများအတွက် အနီးဆုံး ကြက်ခြေနီဆေးရုံ အတိုင်ပင်ခံရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပါ။.
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 1199
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 286
ကြက်ခြေနီဆေးရုံတစ်ခုစီသည် မတူညီသောကြောင့် အောက်ပါဇယားကို ကြည့်ရှုပါ။.
စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အထောက်အပံ့များ ရရှိမှု
Geochang, Changzhou ကြက်ခြေနီဆေးရုံ O O
ဆိုးလ်ကြက်ခြေနီဆေးရုံ O X
Incheon, အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်, Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံ X X
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 342
နေထိုင်၏ကာလအပြင်ဘက်ရက်ပေါင်း 90 နှစ်ရှည်နေထိုင်နေသောမကြာသေးမီကယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ, ထိုအရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖို့ဆေးဝါးအကူအညီ. စင်, ဒုက္ခသည်နှင့်အရေးပေါ်ရောဂါ(အဆိုပါစင်တာအရေးပေါ်ကြိုးရောဂါနှင့်တွေ့ဆုံ)ခြွင်းချက်အကူအညီများမခွဲခြားဘဲနေထိုင်၏အရှည်၏ရရှိနိုင်ပါသည်.
※ သင်သည် နေထိုင်မှုမည်မျှပင်ဖြစ်စေ အမြဲတမ်းကြက်ခြေနီဆေးရုံသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 359
ဆေးဝါးကုသရန် နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပါက ဆေးဖိုး ထောက်ပံ့မှု မပေးနိုင်ပါ။.
VISA: C-3-3(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း), G-1-10(ကုသမှု) စသည်တို့ကို မဆောင်ရွက်ပေးပါ။
 90 တောင်ကိုရီးယားမှာရောက်ရှိလာပြီးနောက်, ဒါပေမဲ့မနေ့ရကျ, သငျသညျဒုက္ခသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထောက်ခံမှုများအတွက်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်စေရန်စီစဉ်နေလျှင်?
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 403
G-1 ဗီဇာကို နိုင်ငံသားလျှောက်ထားမှုအထောက်အထား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ကတ်တွင် အတည်ပြုပြီးနောက် ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။.
※ အင်ချွန်းကြက်ခြေနီဆေးရုံတွင် ဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာတင်ရန် အထောက်အထားယူဆောင်လာရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။.
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 407
Hope Medical Center သည် ကနဦး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်သည်။, အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပံ့ပိုးမှုကာလကို ၃ လမှ ၆ လ သတ်မှတ်ထားသည်။. re-တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာလအားဖြင့်ရပ်ဆိုင်းထိုဆွေးနွေးပွဲများ၏ကနဦးကာလပွုပွငျပွောငျးလဲနှင့် jiwonryul ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်လိုလျှင်.
※ Incheon နှင့် Sangju ကြက်ခြေနီဆေးရုံတွင် ကနဦးညှိနှိုင်းပြီးနောက် 1 နှစ်လျှောက်ထားပါ။
+ စတူဒီယို-jt 2016.05.19 299
သငျသညျပြင်ပအေဂျင်စီများအနေဖြင့်လူနာများ၏သမိုင်းကိုမေးခဲ့လျှင်အပြင်ဘက်အေဂျင်စီများမီဒီယာလူနာအတွက်ဖောင် Download, လူမှုသမိုင်း, စီးပွားရေးအခွအေနမြေားဖန်တီးခြင်းပြီးနောက်တစ်ဖောင်တင်သွင်းကျေးဇူးပြုပြီး. အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ ကြက်ခြေနီဆေးရုံ၏ Hope Medical Center သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။.